‘कोरोना रोक्न लकडाउन प्रभावकारी विधि’
विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट आक्रान्त छ । नेपाल पनि यसको सङ्क्रमणबाट अछुतो छैन । सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सन्तोषजनक पूर्वतयारी गरेका कारण अहिलेसम्म नेपालीले सङ्क्रमणको भयावह स्थिति सामना गर्नुपरेको छैन ।
करिब डेढ महिना अघिमात्र मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अहिले आरामको समय हो तर उहाँ अस्पतालबाट डिस्चार्जपछि दैनिक यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बिहान ६ बजेदेखि राति १२/१ बजेसम्म क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री ओलीसँग कोेरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचार र बन्दाबन्दीका कारण विदेशमा रहेका नेपालीका सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेको पहलका सेरोफेरोमा गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनाल, प्रबन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यसहित राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :
 विश्वका कतिपय मुलुकको तुलनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमै देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा आएका रिपोर्टहरूले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ । यसले कतै स्थिति भयावह हुने त होइन भन्ने मनोविज्ञानसमेत बनेको देखिन्छ । समग्रमा अहिले कोभिड–१९ को परीक्षण, रोकथाम र नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासहरूको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको मूल्याङ्कन के छ ?
 अमेरिकालाई यो सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ, युरोपका केही देशको अवस्था त्यस्तै छ । अबको स्थिति कसरी अघि बढ्ला भन्ने आकलन गरिरहनुभएको छ ?
 लकडाउन घोषणाको २७ दिन भइसकेको छ । आगामी १५ गतेसम्मका लागि त लकडाउन घोषित नै छ । यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरू कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ कि ?
 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको अभियानअन्तर्गत औषधि र उपकरण खरिदमा अनियमितताको चर्चा निकै सुनिएको छ । यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
 मन्त्रिपरिषद्, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीबीचको समन्वय, कार्यविभाजन र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? जति बढी संयन्त्र उति बढी अन्योलजस्तो पनि हुने गर्दछ । रेपिड रेस्पोन्स गर्ने यो बेलामा कार्यान्वयनको खास जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो ?
 कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि भूमिका खोजेको जस्तो देखिन्छ । उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनियो ? त्यस्तो आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
विश्वका कुनै देशमा सरकारभन्दा माथि बसेर सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ ? मैले त देखेको छैन । गुगलमा खोजेँ, पाइनँ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स कुन प्रजातान्त्रिक देशमा
बनेको छ ? नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ, यसले जनताको म्यान्डेट अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दछ ।
अर्को कुरा, सरकारले सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र आम जनतासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सबैका कुरा सुन्नुपर्छ, राय सुझाव लिनुपर्छ । राम्रा सुझावलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग कोरोना सङ्क्रमणका सन्दर्भमा बैठक गरेको छ र परामर्श लिएको छ । नागरिक समाज भनेको को हो ? उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यकै हो भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै नागरिक सदस्य रहने गरी बनाउँ । त्यसो हुँदा पत्रकार, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यो सरकार संविधान र कानुन अनुसार चल्छ । जनताले सुम्पेको उत्तरदायित्व र आफ्नो कर्तव्य अनुसार चल्छ ।
 कोरोना भाइरस सकेसम्म भित्रिन नपाओस् भनी सरकारले गरेको पूर्वतयारीका कारण नेपाल अहिलेसम्म त सुरक्षित नै देखिएको छ तर केही मानिसले सरकारले केही गर्न सकेन, तयारी केही भएन, असफल भयो जस्ता प्रचार निकै गरेको देखिएको छ । यो सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह हो कि ? विकसित हुँदै गरेको नकरात्मकताको विम्ब हो ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
त्यस्तो आग्रहपूर्ण ढङ्गको विरोधले उनीहरूको सामाजिक मनोदशा, सांस्कृतिक स्तर देखाउँछ । अन्य देशमा कोरोना सङ्क्रमणले दिनमा चार हजारसम्म मानिस मरिरहेका छन्, सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । हामी त्यसका विरुद्ध गम्भीर हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने, एकजुट भएर लड्नुपर्नेमा मान्छे मरेनन् भनेर चिन्ता गर्ने ? विदेशबाट कोरोना भाइरस बोकेर आउन दिनुपर्छ, गाउँगाउँ छर्न दिनुपर्छ भन्ने ?
 लकडाउन लम्बिँदै जाँदा कतिपय मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगार बनेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगारहरू स्वदेश र घर फर्किने चाहनाले लामो दूरीको यात्रा पैदलै तय गरिरहेका देखिन्छन् । यसो गर्दा पक्कै पनि कष्ट त हुने नै भयो । यस स्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के सोचिरहेको छ ?
सरकारले त्यसरी बाटोमा हिँडिरहेका, समस्यामा परेका मानिसका लागि जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ खाने बस्ने व्यवस्था गरेको छ, गर्छ तर एउटा कुरा अचम्म लाग्छ स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरकारलाई मानिस समस्यामा परेको जानकारी हुँदैन, पत्रकार कति छिटो हर्ररै त्यहाँ पुग्छ । पत्रकारहरू पनि समस्या समाधानका लागि रचनात्मक भइदिएर एउटा टेलिफोन गर्दिए हुन्थ्यो । मानिसको बिजोगसँग रमाइलो गर्ने गरी मिडिया प्रस्तुत भएको पनि देखिन्छ । औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोही पनि
अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारले खाने बस्ने उचित प्रबन्ध गर्छ । यो सरकारले कोरोना भन्दा अघिदेखि भन्दै आएको हो– कोही खान नपाएर मर्नु पर्दैन, मर्दैन ।
 एकातिर लकडाउन लम्बिइरहेको र यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्थामा दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्नपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न कस्तो प्रबन्ध भइरहेको छ ?
 नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र नेपालीहरू आफ्नै देशमा आउन नपाएको गुनासो छ । यस्तै विदेशमा खासगरी खाडीमा रहेका कामदारको अवस्था झन् संवेदनशील बन्दैछ । विद्यार्थीको समस्या पनि बढ्दैछ । यसमा सरकारले के गर्न सक्छ ? उनीहरूलाई ल्याउने, वैकल्पिक रोजगारी दिने वा अरू वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने ?
आफ्नो देशमा जान पाइएन भन्ने कति जना ? देशभक्ति उम्लिने कति जना ? यतिबेला देशभक्ति उम्लिएर ल्याउने परिणाम के ? अहिले कोरोना बोकेर आउन पाउनुपर्छ गाउँ गाउँमा फैलाउनुपर्छ, मान्छे सोत्तर पार्न पाउनुपर्छ
भन्ने हो ? त्यसो गर्न नपाउँदा पनि जेसुकै होस् भनेर छाडेको छ त ? भारत सरकारले २१८६ जना नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । होटलमा बस्नुस् भन्दा दसगजामा बस्ने, अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्दा हैन हामी समूहमा बस्छौँ भन्ने ? सीमा क्षेत्रमा लम्पसार पर्दिने ? होटलमा बस्नुस् भन्दा नमानेर दसगजामा लाइन लाग्नुलाई अलपत्र कसरी भन्ने ? भारतमा दिनदिनै सङ्क्रमण बढिरहेको छ, नेपालीहरू दिनहँु घर फर्कने कुराले नेपालमा सङ्क्रमणको सम्भावना के हुन्छ ? विद्वान्हरू नेपालमा सङ्क्रमण नफैलिएकोमा चिन्ता जाहेर गर्दै अनागरिक बनाउन पाइन्छ ? देश फर्किने अधिकारबाट वन्चित गर्न पाइन्छ ? भनिरहेका छन् । परिस्थिति बुझेर आग्रहहरू राख्न पाइन्छ कि बुझ्दै नबुझिकन । के धार्चुलाका मानिसहरू खानै नखाइकन २०÷२५ दिन त्यसै बसेका होलान् ? खाने बस्ने प्रबन्ध गरिएको छ । हामी एक जना पनि सङ्क्रमित व्यक्ति भित्रिन दिँदैनौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इमिसेन्टर हुन दिइँदैन ।
 यस्तो विषम स्थितिमा सरकार र पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध र समन्वयात्मकरूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार एकातिर पार्टी अर्काेतिर जस्तो देखिएको छ । एकतापछि पार्टीमा पूर्वसमूह वा अन्य खेमामा नाममा विवाद कायमै देखिन्छ ?
केहीले व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ । ती कुराहरू कति सान्दर्भिक छन् ? तिनले आफँैलाई असान्दर्भिक बनाउँछन् । तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन् । मबाट योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो । मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु । म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ । 